Article – Page2– Voice of Myanmar
ရန်ကုန်တိုင်းက ရခိုင်နဲ့ကရင် တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနေရာ စိတ်ဝင်စားစရာ
11 months ago 11 months ago Editor Htein Lin
နိုဝင်ဘာ-၆-၂၀၂၀ ဆွေလင်းထွန်း(VOM) ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနှင့် ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး နေရာတွေပြိုင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၁ ဦးမှာ နာမည်ကြီးနိုင်ငံရေးသမားတွေပါတာမို့ အကြိတ်အနယ်ယှဉ်ပြိုင်ကြရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနေရာအတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၅ ဦးအနက် ဒေါ်ထုမေဟာ လက်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီကို ကိုယ်စားပြုပြီး အနိုင်ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ယခင်ကရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲချုပ်ပါတီဝင်တဦးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ နှစ်ခြမ်းကွဲခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီက ထွက်ခွင့်မပေးခဲ့တဲ့အတွက် ခုရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ တသီးပုဂ္ဂလအနေနဲ့ပဲ ဝင်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ရောက်ရခိုင်လူငယ်တွေ တည်ထောင်ထားတဲ့ Scholor Institute မှာ အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာမတဦးအဖြစ် ပညာဒါနသင်ကြားပေးနေတဲ့အပြင် ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းစောင့်ကြည့်ရေးလှုပ်ရှားမှု(Shwe Gas Movement) မှာ ညှိနှိုင်းရေးမှုးတဦးအနေနဲ့ လုပ်ကိုင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၇၃၀၀၀…
Article, Election, ဆောင်းပါးLeaveacomment
11 months ago Editor Htein Lin
မန္တလေး- နိုဝင်ဘာ ၃-၂၀၂၀ ဆွေလင်းထွန်း(VOM) တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေအနက် ရန်ကုန်တိုင်းဟာ ကိုဗစ်ရောဂါကူးဆက်ခံရမှု အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့အချိန် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေ အများဆုံးရှိတာ၊ လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်တာ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ အစုံလင်ဆုံးဖြစ်တာ စတဲ့အချက်တွေကြောင့် ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးဟာ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအသုံးပြုမဲဆွယ်တာတွေ ရန်ကုန်တိုင်းမှာ အများဆုံးတွေ့ရသလို ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာ ထင်ရှားတဲ့သူအချို့လည်း ရန်ကုန်တိုင်းမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ဟာ အမျိုးသားရေးသမားတွေရဲ့ အဓိက ပစ်မှတ်တခုဖြစ်သလို၊ အမျိုးသားရေးသမားတွေ ရန်ကုန်မှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်တာ၊ ရန်ကုန်က အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို လူမှုကွန်ယက်ကနေ တိုက်ခိုက်တာ၊ အမျိုးသားရေးဆရာတော်အဖြစ် နာမည်ကြီးတဲ့ ဆရာတော်ဦးဝီရသူဟာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ ၆ရက်သာ လိုတော့တဲ့အချိန်မှာ လာရောက်အဖမ်းခံတာတွေကနေ သက်သေပြနေပါတယ်။ ဦးဝီရသူဟာ ယမန်နှစ် မေလအတွင်းက ရန်ကုန်မြို့ မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံမှာ အစိုးရကို အကြည်ညိုပျက်စေမယ့် ဟောပြောမှုတွေ…
ပွဲငတ်နေခိုက် မဲဆွယ်လိုက်သည်နှင့် မဲဆွယ်မျိုးစုံအဖုံဖုံ
မန္တလေး- အောက်တိုဘာ ၂၈-၂၀၂၀ ဆွေလင်းထွန်း+နေလင်း( VOM) ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ ရက်ပေါင်း ၆၀ အလို စက်တင်ဘာ ၆ ရက်နေ့ကစပြီး နိုင်ငံရေးပါတီတွေ မဲဆွယ်စည်းရုံးတာတွေ စတင်နိုင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ကြေညာခဲ့တဲ့အချိန်ဟာ ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မို့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အကြပ်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ တပါတီနဲ့ တပါတီ သူ့အကဲခတ် ကိုယ့်အကဲခတ် စောင့်ကြည့်ရင်း ပါတီကြီးတချို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ လမ်းပေါ်စထွက်ပြီး သွေးတိုးစမ်းရာကနေ ဝန်းရံသူဆိုတဲ့ လူအုပ်ကြီးတွေ လမ်းပေါ်မှာ အလျှိုလျှိုပေါ်လာခဲ့တာ အားလုံးအမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မဲဆွယ်လိုက်သူတွေထဲက တချို့ကို ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေမေးကြည့်တော့ သူတို့ကြိုက်တဲ့ပါတီနိုင်စေချင်လို့ လိုက်တာဆိုတဲ့ အဖြေကလွဲပြီး မဲပေးရမယ့်အနေအထားကို လေ့လာမထားသူအများစုနဲ့ သူတို့နယ်က မဲပေးရမယ့် သူတို့ဝန်းရံတဲ့ပါတီရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့ နာမည်ကိုတောင် မသိသူအများစုဖြစ်တာကို ဗီအိုအမ်ကမေးမြန်းတာမှာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနကတော့ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရာမှာ ကိုဗစ်…
Article, Election, ဆောင်းပါး, ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယိုLeaveacomment
မန္တလေး-အောက်တိုဘာ ၂၇-၂၀၂၀ နေလင်း+ဆွေလင်းထွန်း (VOM) မြန်မာနိုင်ငံမှာ တံခါးဖွင့်မှုဝါဒကျင့်သုံးလာပြီးနောက် တယ်လီဖုန်းဆင်းကဒ်တွေဟာ လမ်းဘေးမှာ အလွယ်တကူဝယ်လာနိုင်တာမို့ တယ်လီဖုန်းသုံးနိုင်သူများပြားလာသလို ဖေ့ဘုတ်သုံးစွဲသူဟာလည်း သန်း ၂၀ ကျော်လာတယ်လို့ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေရဲ့ စာရင်းအရသိရပါတယ်။ ဒီလို လူအများသုံးစွဲလာနိုင်တာဟာ တဖက်ကကောင်းသလို အခြားတဖက်မှာလည်း အင်တာနက်နဲ့ မယဉ်ပါးသေးသူတွေ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့သဘောသဘာဝကို နားလည်မှုအားနည်းသူတွေအတွက် အမှားတွေကို အလွယ်လက်ခံမိပြီး အမှန်ထင်ကာ ပြန်လည်ဖြန့်ဝေတာတွေကြောင့် မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ တက်ခဲ့တဲ့ သာဓကတွေ ရှိနေပါတယ်။ ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ နီးကပ်လာတာနဲ့အမျှ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ် လူမျိုးရေး ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတု၊ သတင်းမှားတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်တာဟာ အရင်ထက် များပြားလာပါတယ်။ သတင်းတု သတင်းမှားတွေ ပျံ့နှံ့လာတာဟာ လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘုတ်သုံးစွဲမှု မြင့်တက်လာတာက အကြောင်းရင်းတခု ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေကို အတုလုပ်တာတွေ၊ ပါတီတခုနဲ့ တခုကြား…
Article, News, ဆောင်းပါး, နည်းပညာ, သတင်းတုသတင်းမှားဖေါ်ထုတ်ခြင်း, သုံးသပ်ချက်Leaveacomment
တောင်ကုတ်က NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၃ယောက်ကို AA က ဖမ်းထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD ပါတီရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်နောက်က ဂယက်
တောင်ကုတ်က NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၃ယောက်ကို AA က ဖမ်းထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD ပါတီရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်နောက်က ဂယက် အောက်တိုဘာ ၂၂-၂၀၂၀ ဆွေလင်းထွန်း(VOM) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တောင်ကုတ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း သုံးဦးကိုအောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့မှာ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ NLD ပါတီက ကြေညာချက်တစောင်ကို အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်နေ့စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသုံးဦးဟာ ဥပဒေဖောက်ဖျက်သူတွေ မဟုတ်တာကြောင့် အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသုံးဦးဟာ ဥပဒေဖောက်ဖျက်သူတွေ မဟုတ်ဘဲ AA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ပါ အချက်တွေဟာ အခြေအမြစ်မရှိဘဲ တဖက်သတ် ကောက်ချက်ချမှုသာ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ AA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေ‌ဟာ နောင်အနာဂတ် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ ကြီးမားတဲ့ အဟတ့်အထားတခု ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ပါရှိပြီး…
Article, သုံးသပ်ချက်Leaveacomment
12 months ago Editor Htein Lin
( နိုဝင်ဘာ ၈ရက်နေ့မှာကျင်းပတော့မယ့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် သတင်းဌာနအသီးသီးဟာ ပြင်ဆင်မှုမျိုးစုံလုပ်နေကြပြီဖြစ်တာမို့ အယ်ဒီတာတွေ၊သတင်းထောက်တွေအတွက် သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းရဲ့ အငြိမ်းစားဌာနမှူးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်တင်ထားဆွေက သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ဝေမျှထားတာဖြစ်ပါတယ်) အယ်ဒီတာ ( VOM) ရွေးကောက်ပွဲကာလ သတင်းယူရာတွင် လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များ ရွေးကောက်ပွဲကာလ သတင်းထောက်တွေလိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ်တွေကို သက်ဆိုင်ရာ သတင်းဌာနတွေက ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီမှာ ထုတ်ပြန်လေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ဘီဘီစီက အယ်ဒီတိုးရီးယား ဂိုက်လိုင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းယူတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေ ဖော်ပြထားပေမယ့်လည်း ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတဲ့အခါမှာ သတင်းထောက်တွေလိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ်းအသေးစိတ်ကို ထုတ်ပြန်ပေးပါတယ်။ ‌ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံရေးအခြေအနေက အရင်လိုမဟုတ်ပဲ ပြောင်းသွားနိုင်တာကြောင့် သတင်းထောက်တွေ လိုက်နာရမယ့် ဂိုက်လိုင်းတွေ ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်တာတွေကို ဖြည့်စွက်ဖော်ပြပေးပါတယ်။ သတင်းတိုက်အသီးသီးက ရွေးကောက်ပွဲကာလ သတင်းယူတဲ့အခါမှာ လိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ်တွေ ထုတ်ပြန်ထားလေ့ရှိတာမို့…
“စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကို ဘယ်လို ဖြည့်ဆည်းမလဲ”
“စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကို ဘယ်လို ဖြည့်ဆည်းမလဲ” သွေး (စစ်ကိုင်း)၊ စက်တင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၂၀ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် စွမ်းအင်ရရှိရေးဟာ အထူးပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ စွမ်းအင်ရင်းမြစ်တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေး အတွက် ကောင်းမွန်အဆင်ပြေတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမှာပါ။ ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင် (Renewable Energy) ပိုထုတ်လုပ်ဖို့ ဦးတည်ကြိုးပမ်း သွားမယ် ဆိုရင် စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာ ဖြစ်သလို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုကိုပါ လျှော့ချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံ့လူဦးရေရဲ့ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း ဝန်းကျင်ပဲ လျှပ်စစ်မီး ရရှိသေးတာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်မီးရရှိဖို့ မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ရေ၊ လေ၊ ဘူမိအပူကနေ ထုတ်ယူနိုင်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ အများဆုံး ထုတ်လုပ်နေတာက ရေအားသုံး…
Article, နည်းပညာ, သုံးသပ်ချက်Leaveacomment
Unicode သေသည်ထိ အမှိုက်ကောက်မယ် ရှိုင်းအောင် (VOM) အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျ ီခပ်နွမ်းနွမ်းနဲ့ ပုဆိုးတိုတိုဝတ်ထားတဲ့ အသက်ရှစ်ဆယ်ကျော်လောက်ရှိမယ့် အဘိုးအိုဟာ တုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့ ပေတရာလမ်းပေါ်က အမှိုက်စလေးတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခု ကောက်ပြီး လေးပေလောက်မြင့်တဲ့ ဘီးနှစ်လုံးပါ အစိမ်းရောင်အမှိုက်ပုံကြီးထဲကို ထည့်လိုက်ပါတယ်။ သူဟာ အဲလိုအမှိုက်တွေကို ကောက်ထည့်ပြီး အမှိုက်ပုံးကို နောက်ပြန်ဆွဲပြီးတော့ ခြေလှမ်းကို ဖြေးညှင်းစွာ တရွေ့ရွေ့ လှမ်းကာ ဈေးကြီးရှိတဲ့ ဘက်ကို ဦးတည်ပြီးသွားနေပါတယ်။ အချိန်အားဖြင့်တော့ ဧပြီနွေရဲ့အပူချိန်မလာသေးခင် ဆောင်းအကြွင်းအကျန်အအေးဓါတ်လေးရှိသေးတဲ့ ရောင်နီလာစ၊ လမ်းတွေကို မြင်ရယုံအချိန် နေရာကတော့ စစ်ကိုင်းမြို့ရဲ့ မြို့မဈေးအနီးမှာပါ။ လမ်းပေါ်မှာ တဒုတ်ဒုတ် မြည်ပြီးလိမ့်နေတဲ့ သူ့အမှိုက်ပုံး ဘီးလုံသံ စည်းချက်ကို အဖော်ပြုပြီး ရှိသမျှအင်အားတွေစုစည်းထားတဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ အမှိုက်တွေအများဆုံးရှိတဲ့ စစ်ကိုင်းမြို့က မြို့မဈေးလမ်းမပေါ်က အမှိုက်တွေကို ကောက်ပြီး ဈေးထောင့်မှာ အသင့်ရှိတဲ့ အမှိုက်ကားပေါ်ကို တင်ပေးဖို့ သူသွားနေတာပါ။ သူကောက်စရာတွေကောက်ထည့် တင်ပေးပြီးရင်…
Article, ဆောင်းပါးLeaveacomment
Coronavirus and China’s struggles
Coronavirus and China’s struggles February 9, 2020 VOM The death toll of Coronavirus in China has raised up to 908 with 37290 confirmed cases and 28942 suspects. The death toll has outnumber the number of those who were died with SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) that fears to be infected with coronavirus is dynamically increasing. When the world…